खुशीको खबर आयो सबै नेपालीले थाहा पाउनै पर्ने : कसरी भए कोरोना संक्रमित निको ? -
खुशीको खबर आयो सबै नेपालीले थाहा पाउनै पर्ने : कसरी भए कोरोना संक्रमित निको ?
बुटवल । नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको इपिसेन्टर बनेको प्रदेश ५ मा पछिल्ला दिनहरू संक्रमितहरुको संख्या वृद्धि मात्रै होइन, उपचारपछि निको भएर जानेहरू पनि बढ्दै छन् । प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरुबाट उपचार गरेर घर फर्कनेहरूको संख्याले कोरोनाको त्रासका बीच प्रदेशवासीलाई थोरै भए पनि खुसी मिलेको छ ।बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट शुक्रबार २१ जनाको कोरोनो जितेको भोलिपल्ट हिजो साँझ बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालबाट पनि एकसाथ १० जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् ।
बाँके सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएको ठाउँ हो । हिजो साँझ बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा निको भएका उनीहरू कपिलवस्तुका हुुन् । दुई साता अघि अस्पताल भर्ना संक्रमितको लगातार दुई पटकको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको बुटवल धागो कारखानासहित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिरामीलाई निको बनाएर पठाउँदा खुसी लागेको छ।’निको भएर जानेहरूले ‘कोरोनाबाट डराउनुपर्दैन, सजिलै जित्न सकिन्छ’ भन्ने सन्देश पनि दिएको उनी बताउँछन् । अब आइसोलेसन नपाएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको संक्रमितलाई राखिने जनाइएको छ । धागो कारखानाको कोरोना अस्पतालमा रुपन्देही र कपिलवस्तुका ३६ जनाले उपचार गराइरहेका थिए ।
Tags: corona virus, covid 19 in nepali, tablets, vitamin c
Previous गण्डकी प्रदेशका कोरोना संक्रमण १ सहित थप ३० जनामा कोरोना पुष्टि
Next गण्डकीमा कोरोना र डेंगुसँगै मलेरियाको त्रास